Nsɛm Bi a Ɛfa Bible Ho: Adɛn Nti na Ɛsɛ sɛ Woma Bible Ho Asɛm Hia Wo?
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luo Malagasy Maltese Norwegian Nzema Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zulu
Adɛn Nti na Ɛsɛ sɛ Woma Bible Ho Asɛm Hia Wo?
Nhoma a agye din paa wɔ wiase ne Bible. Adɛn ntia? Ade biako a ɛwɔ Bible ho ne sɛ wokan a wuhu n’ani so ntɛm, efisɛ nsɛm a ɛwom no fa nnipa a wɔatena ase pɛn ho; ɛma yehu sɛnea wɔne wɔn yɔnko nnipa tenae ne sɛnea na wɔne Onyankopɔn ntam te. Nsɛm a ɛwom no, yebetumi de abɔ bra; emu nyɛ den na wotumi kyerɛ ase kɔ kasa bebree mu ma nnipa a wɔte baabiara kenkan te ase bere biara. Bible mu afotu nso boa yɛn biribiara mu.
Ɛnyɛ sɛ Bible ka Onyankopɔn ho asɛm kɛkɛ, na mmom ɛka sɛ ɛyɛ nhoma a efi Onyankopɔn hɔ. Ɛma yehu Onyankopɔn din ne ne suban; ɛma yehu nea enti a Onyankopɔn bɔɔ asase ne nnipa. Efi tete na papa ne bɔne adi asi, na Bible ka ɛno nso ho asɛm; ɛma yehu awerɛhosɛm bi a ɛfa obiara ho, nanso ɛkyerɛ yɛn sɛ ebewie yiye. Sɛ wode adwempa kenkan Bible a, ɛbɛma woanya gyidi ne anidaso.
Nsɛm bi wɔ hɔ a, yɛrentumi nhu wɔ baabiara, gye sɛ Bible mu nko ara. Bible ma yɛte nsɛm bi ase yiye paa. Nsɛm no bi ni:
Nea enti a Onyankopɔn bɔɔ yɛn, ne nea enti a yehu amane
Nhyehyɛe a Onyankopɔn de begye adesamma
Nea Yesu ayɛ ama yɛn
Asase ne nnipa daakye
Yɛsrɛ wo gye bere kakra kenkan nhoma yi mu nsɛm a aka no, na wubehu asɛm pɔtee a ɛwɔ Bible mu.
NSƐM BI A ƐFA BIBLE HO
Asɛmti: Ɛkyerɛ sɛnea Onyankopɔn soro Ahenni de adetrenee ne asomdwoe bɛba asase so
Emu nsɛm: Nhoma dodow a wɔde Hebri kasa kyerɛwee yɛ 39 (emu kakra wɔ hɔ a wɔde Aram kasa na ɛkyerɛwee); nea wɔde Hela kasa kyerɛwee yɛ 27
Ne kyerɛw: Bible no kyerɛw dii bɛyɛ mfe 1,600, na nnipa bɛyɛ 40 na wɔkyerɛwee. Ne kyerɛw no fii ase 1513 A.Y.B., na ɛbaa awiei afe 98 Y.B.
Kasa dodow: Seesei wɔakyerɛ Bible no nyinaa anaa ne fã bi ase kɔ kasa bɛboro 2,500 mu